Translate Yoruba to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Yoruba to Myanmar (Burmese), Yoruba to Myanmar (Burmese) translations, Yoruba to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Pẹlẹ o bawo ni မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Ṣe ẹnikan wa? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Mo fẹràn rẹ gan-an pupọ ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Elo ni iwọn hamburger naa? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Ṣe o le pe mi takisi kan? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
Ma binu ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
Mo tọrọ gafara တဆိတ်လောက်
Mo nife ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Ilọ ofurufu mi ti ni idaduro အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Mo wa nibi fun iṣowo ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Kaabo, orukọ mi jẹ မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Mo binu, ṣugbọn emi ni iyawo ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Emi yoo fẹ lati beere lọwọ rẹ ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Ṣe o le mu mi lọ si papa ọkọ ofurufu naa? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Kini akoko ni bayi, jowo? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Ibo ni ibudo olopa ti o sunmọ julọ wa? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Ṣe Mo le ya ṣaja foonu rẹ jọwọ? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Se o le ran me lowo? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Jọwọ fun mi ni ohun mimu, jọwọ? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Elo ni o jẹ? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Mo jẹ inira si giluteni ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Pe dokita kan ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Ṣe dokita kan wa? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Ṣe Mo le ni ipe kan? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Pe mi Oludari rẹ jọwọ. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Ibi yi dara pupọ ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Mu mi lọ si hotẹẹli jọwọ ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Kini nọmba nọmba yara mi? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?